Ndezvipi zvikonzero zvekusatendeseka kwepamoyo | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/09/2021 22:39 | Hukama
Vanhu vazhinji vanowanzo batanidza kusatendeseka nebonde, Zvisinei, izvo zvinozivikanwa sekusatendeseka kwepamoyo zvinogona zvakare kuitika. Muchiitiko ichi, kutengeswa kwemumwe wako kunoitika nenzira inobata. Iko kutaurwa kwekusatendeseka kwepamoyo kwakanyanya kuoma kuona pane kusavimbika uye kwakanyanya kuwanda kupfuura iwe zvaunogona kufunga.
Munyaya inotevera tichazotaura nezverudzi urwu rwekusatendeka, zvikonzero zvinokonzeresa uye ingakundwe sei.
1 Kusatendeseka kana kusatendeseka
2 Ndezvipi zvikonzero zvekusatendeseka kwepamoyo
3 Maitiro ekukurira kusatendeseka kwepamoyo
Kusatendeseka kana kusatendeseka
Sezvakaita kusavimbika pabonde, kusatendeseka kwepfungwa kutengeswa kukuru kwevaviri uye kazhinji ndiko kunokonzeresa kuparara kwakawanda kwanhasi. Mukusatendeseka kwepamoyo pane hunyengeri kune mumwe wako, sezvo paine manzwiro uye nehukama nzira kune wechitatu munhu. Muzviitiko zvakawanda kwazvo, kunzi kusatendeka kunoitika nekuti mumwe wevaroorani ari ega pamoyo.
Kusatendeseka kwepamoyo kunogona kukonzera kurwadziwa kukuru kune munhu anotambura nazvo. Inogona kutombotarisirwa zvakanyanya kudarika kusavimbika pabonde uye ndeyekuti pane kuraswa kwakazara mukati mevaviri veemanzwiro uye nehunhu. Dambudziko hombe nerudzi urwu rwekusatendeka kuri kukonzerwa nenyaya yekuti zvakanyanya kunetsa kuziva kunze kwekusatendeseka.
Kune zvikonzero zvakawanda kana zvikonzero zvinogona kutungamira munhu kunyengedza mweya kune mumwe wake. Kushaikwa kwekutaurirana uye kusakwanisa kuratidza manzwiro akasiyana, Inogona kukonzera munhu kusarudza kutsvaga chimwe rudo kunze kwehukama. Kushaikwa kwezviratidzo zverudo kana kudanana mune vaviri vacho zvinowanzova zvimwe zvezvikonzero zverudzi urwu rwekusatendeka. Rangarira kuti rudo runofanirwa kuchengetwa zuva nezuva uye dzimwe nguva kushayikwa kwenguva kunoita kuti vanhu vazhinji vapedzisire vasina hanya nehukama hwavo nevamwe vanhu.
Maitiro uye monotony mukati mevaviri ndeimwe yezvakanyanya kukonzera kusatendeseka kwepamoyo. Chikamu chinotambura nehukosha hwakadai, afunga kutarisa kunze kwechimwe chinhu chaasina muhukama. Chinhu chakajairika ndechekuti kana vaviri vacho vakagwinya uye paine kutaudzana kwakanaka pakati pevaviri, kusavimbika kwepamoyo kwambotaurwa hakuzomboitika.
Maitiro ekukurira kusatendeseka kwepamoyo
Sezvakaita zvepabonde, zvakaoma kwazvo kukwanisa kukunda kusatendeseka kunokanganisa. Mune zvimwe zviitiko, kunyengera uku kunowanzoreva kupera kwevaviri uye mune zvimwe zviitiko, kunoitwa kutsvaga mhinduro dzekuchengetedza hukama. Izvo zvakakosha kuti utangezve kutaurirana kwakanaka zvakare uye utaure zvinhu zvakajeka nemumwe wako.
Pakutanga zvinogona kuomarara asi zvakakosha kuti uise parutivi kutsamwa, chigumbu kana chigumbu uye edza kuvhura peji nekukurumidza. Kukumbira kuregererwa uye kubvuma kukanganwirwa kwakakosha uye kwakakosha, kuitira kuti vaviri vacho vagone kumonera zvekare pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Ndezvipi zvikonzero zvekusatendeseka kwepamoyo